သက်ဝေ: လှမ်းအဝေးမှ လွမ်းတေးတပုဒ်
Posted by သက်ဝေ at 10:55 PM
I am glad to read your new post, Ma Ma Thet Wai! Looking forward to read "at the age of 27" too.
tzm August 1, 2011 at 11:32 PM
မိုးငွေ့...... August 2, 2011 at 12:06 AM
ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး အက်ဆေးအသစ်တစ်ပုဒ်တော့ဖတ်ရပြီဆိုပြီး လာတာ...စာပြန်နွေးတဲ့ ကျောင်းသားနဲ့လာတွေ့နေတယ်...။ ကဲ ကဲ လိမ်၂မာ၂လေးနဲ့ အိမ်စာလေးလုပ်နေနော်...။ နောက်ပြီးမှ ပြန်လာစစ်မယ်...း))
Hmoo August 2, 2011 at 12:43 AM
မေဓာဝီ August 2, 2011 at 12:53 AM
လွမ်းတေးမဆုံးစေနဲ့ သက်သခင် ... :))
အမသက်ဝေပို့စ် ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - ၀တ္ထုကို သတိရသွားလို့ ။ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်က စောသခင်ဆိုတော့ အမသက်ဝေက သက်သခင်ပေါ့။
သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပြီးရင် ပြန်သွေးမအေးအောင် ဆက်တိုက်လုပ်ရမှာနော် ... အမ။
မအိမ်သူ August 2, 2011 at 1:19 AM
စာတွေဖတ်ဖို့ စောင့်နေပါတယ် မသက်ဝေရေ.. မအားတဲ့ အခါတော့လည်း ဒီလိုဘဲပေါ့။ စာဆိုတာကလည်း တကယ်စိတ်ပါမှ ရေးလို့ကောင်းတာမျိုးဆိုတော့ စိတ်ထွေနေတဲ့အချိန်မျိုးတွေဆို ဘာမှထွက်မလာတတ်တာ အမှန်ပဲ။
တောက်ပကြယ်စင် August 2, 2011 at 1:26 AM
ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ပိုစ်လေးကလည်း ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ သက်ဝေရယ်။ ဟိုရောက် ဒီရောက်ပိုစ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်တောင် ကောင်းလိုက်လိမ့်မလဲနော်။ ကျန်းမပျော်ရွှင်ပါစေနော့...(သစ်လွင်သော အသစ်အသစ်တွေကို မျှော်လင့်လျက်ပါလို့...)
Iora August 2, 2011 at 3:31 AM
ကုိုယ့်ဆိုဒ်မှာ ထိပ်ဆုံးကပေါ်လာတော့ မအားသေးလို့နောက်မှဖတ်မယ်ဆုိုပြီးတွေးထားတာကိုအသာထား ချက်ချင်းလာဖတ်လိုက်ပါတယ်။ ပျောက်နေတာကြာလို့ သတိရနေတာ။ အားလုံးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ ဝမ်းသာမိပါတယ်။
မြူးမြူး August 2, 2011 at 7:39 AM
Welcome back, Ma Ma Thet Wai! :)
Nyi Linn Thit August 2, 2011 at 8:03 AM
ပျောက်နေပေမယ့် စာကြေတာတော့ အထင်အရှား ပဲဗျို့၊ စက်ရပ်သတင်းတွေ၊ ဆွေးနွေးခန်းတွေကို တစ်ခုမှ လွတ်ပုံမရဘူး..၊း) ကျနော်လည်း ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတွေ မှာ အလုပ်များရတဲ့ ကြားတဲ့ Wi-fi router ကပါ ပျက်ချင်ချင်မို့လို့ ကွန်နက်ရှင်က မကောင်းတော့ ဘာမှ မတင်ချင်ဘူး ဖြစ်နေခဲ့သေးတာ...၊ ကဲ.. ငှက်တွေလည်း လွတ်လပ်စွာ ပျံနိုင်ပါစေတော့၊ လယ်တွေကိုင်းတွေ လည်း သူရင်းငှားနဲ့ ထား၊ ကိတ်မုန့်ဆိုင်လည်း လက်လွှဲခဲ့ပြီး ကီးဘုတ်ပေါ်က နွေးလက်စ လက်ချောင်း တွေ ဆက်ပြီး နွေးပါစေလားဗျာ.....။း)
T T Sweet August 2, 2011 at 8:17 AM
Well come back my friend. Cheers!!!
ချစ်ကြည်အေး August 2, 2011 at 11:53 AM
If you need Oven to reheat, I will send you one :))) hee hee....
Please write , waiting for new post
really really new Essay :) OK
ချစ်ကြည်အေး August 2, 2011 at 11:57 AM
နေပါဦး ရယ်ကျဲကျဲ ဆိုတာ ဘာတုန်း...၊ ရယ်နေတုန်း ရေရောလိုက်တာလား....ဖြေပါ...ဖြေပါ....:)
sonata-cantata August 2, 2011 at 1:11 PM
မိုးယံ August 2, 2011 at 3:46 PM
အလွမ်းတေးနဲ့ စာနွှေးတာ တော်လိုက်တာ..။
ဘလော့ဂ်ဂါများ မရေးဖြစ်တာတောင် အဖတ်တော့ မပျက်ကြဘူး...အံ့လောက်တဲ့ သံယောဇဉ်ပါပဲ။
Thandar Lwin August 2, 2011 at 4:05 PM
ဒီပိုစ်လေးကိုဖတ် ၊ ပိုစ်အသစ်လေးမျှော်ရင်း အဟောင်းလေးတွေကိုပါ ပြန်လှန်နေပါတယ် မမရေ။
ahphyulay August 2, 2011 at 8:37 PM
အသံကုန် အရင်အော်ထုပ်ပြီးမှ အပြင်
ထွက်ဆိုသလို့ ပေါ့ နော်...။
ဘလော့ ရေးသူအများစု မကြာခဏဖြစ်နေ
တတ်ပါတယ်။ မရေးချင်ပေမယ့် လည်း
မရေးပဲနဲ့ လဲ မနေနိုင်...။
ကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်နေတဲ့ 
တစ်လှည့် တင်လိုက်နဲ့အဆက်ပြတ်မသွား
မြစ်ကျိုးအင်း August 2, 2011 at 10:41 PM
ကျနော်တော့ စာမရေးတာကြာသွားရင် ရေးဖို့ပျင်းပျင်းသွားတယ်။ အာရုံတွေ တော်တော်ကို ပြန်စုယူရတာပဲ။
rose August 3, 2011 at 6:42 AM
sis, looking forward to read your new posts. Your writing is so nice , cute and attractive :)
ပန်းချီ August 4, 2011 at 8:55 PM
ဒီကလည်း ဝေးဝေးကနေလွမ်းနေပါတယ်...ခုတော့ တုပ်ကွေးမိနေုလို့ စာမရေးနိုင်ဘူးး(
စီးပွားရေးတွေသိပ်သောင်းကျန်းပြီး ပေါင်းသင်၊ အပင်စိုက်၊ မွေးမြူရေးတွေချည်းပဲလုပ်မနေနဲ့ဦးလေ မရယ်..ဒီကပိတ်သက်ကြီးက အမြဲအားပေးနေတဲ့ ဟာပဲဟာကို..း))
ZZZ August 4, 2011 at 11:42 PM
ဗိုလ်အောင်ဒင်ပြန်လာပြီ ၊ အဲလေ မှားလို. ဗိုလ်သက်ဝေပြန်လာပြီ ..
ရုံးမှာ အလုပ်နည်းနည်းပါးရင် ဘလော့တွေလျောက်ဖတ်၊ အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ဘလော့တကာလျောက်လည် ..
အင်း ... အမလေးတို.လို ဘလော့ဂါတွေမရှိရင် လောကကြီးက အလွန်ပျင်းစရာကောင်းလို. ရိပ်သာသွားပြီး တရားမှတ်ဖို.ပဲရှိတော့တယ်
ပို.စ်အသစ်တွေကို မျှော်နေပါ့မယ် ...
တန်ခူး August 6, 2011 at 11:02 PM
ကိတ်မုန့် ဆိုင် ဆိုင်နီးချင်းဖြစ်ချင်လို့ ... သက်ဝေရေ.. တလလေးပဲဝေးအောင် controlလုပ်နိုင်တာကို အားကျမိပါရဲ့... ဒီက အပေအတေ ငပျင်းမတန်ခူးဆို တနှစ်လောက် ပျင်းတာတောင် ပျင်းလို့ မဝ...ဆိုးပုံများလေ...
JulyDream August 15, 2011 at 11:22 AM
ပို့စ်ကို ဖတ်နေရင်း ငါးမန်တောင် ဟင်းချို မသာက်ဖို့ ပုဂံမှာ ဘတ်စ်ကားစီးပြီး လှုံ့ဆော်ရမလားဟင် ဖြစ်သွားတယ်။